यो फुटबल विश्व च्याम्पियनशिप। यो के हो र यो शब्द अर्थ के हो?
हरेक4वर्ष फुटबल प्रशंसक विश्व कप मा आफ्नो टीम लागि मज्जा गर्न TV मा भेला हुन्छन्। यस प्रतियोगिताको 80 वर्ष पहिले स्थापित भएको थियो र तब देखि यसको परम्परा परिवर्तन भएको छैन। यो फुटबल कार्यक्रममा प्राप्त गर्न व्यवस्थित जो कोहीले, उहाँलाई एक जीवनकालमा लागि सम्झना। लाखौं मानिसहरू आफ्नो राष्ट्रिय टोली समर्थन गर्न, च्याम्पियनशिप लिन जो देश, आउन र यो प्रतियोगिताको मुख्य मनपर्ने विरुद्ध प्रदर्शन गर्नेछन् कसरी हेर्नुहोस्।
शब्द "विश्व च्याम्पियनशिप" को मूल
हालै, वाक्यांश "विश्व कप" सामान्यतया बदलिएको हरेक शब्द "संसारको च्याम्पियनशिप।" यो अवधारणा पहिलो प्रयोग भएको थियो जब यो र के हो? 1982 मा, विश्वको फुटबल प्रतियोगिताको स्पेन लिए। त्यो त्यो शब्द को जन्म ठाउ थियो। स्पेनी हालतमा मा "दुनिया" को "विश्व च्याम्पियनशिप", र शब्द एक "विश्व च्याम्पियनशिप" को रूपमा पढ्न छ भन्ने तथ्यलाई। चाखलाग्दो कुरा, वैश्विक फुटबल प्रतियोगिताको आधिकारिक नाम मा शब्द "फिफा विश्व कप" समावेश गर्दैन। प्रशंसक र टिप्पणीकारहरू टूर्नामेंट को नयाँ नाम को जन्म योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई थिए Espana 82. - अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल संघ प्रतियोगिताको कोपा डेल Mundo डे Futbol आफ्नो नाम दिए। कि वर्ष मा, प्रतियोगिताको 24 फुटबल शक्ति समर्थित दुई लाख भन्दा बढी मान्छे, उपस्थित थियो।
प्रशंसक मन्त्र र गीतहरू विभिन्न बनेको र टेलिभिजन टिप्पणीकारहरू तिनीहरूलाई समर्थित र अभिवादन शब्द आफ्नो प्रसारण "Mundial" थाले छ। ठूलो जिम्मेवारी तिनीहरूलाई सुम्पिएको छ किनभने पहिलो पटक, स्पेनिस खेलाडी अनुभव गरेका छन् कल्पना गर्न के यो छ। यस प्रतियोगिताको मा, स्पेनको टोली अझै शक्ति र महानता, युरोपेली र विश्व चरणमा ट्राफियों धेरै लिनुभयो कि आजको स्पेनिश राष्ट्रिय टोली विपरीत छैन। 1982 मा, "लाल उतेजना" तिनीहरूले समूह "बी" मा तेस्रो स्थान जित्यो र च्याम्पियनसिपलाई उड्यो जहाँ दोस्रो चरण, सम्म मात्र पुगेको छ। स्पेनी फिफा विश्व कप अन्य टोली चमक।
चाप इटालियन टोली
को फुटबल संसारको च्याम्पियन्स आफ्नो आपत्तिजनक र रक्षात्मक लाइन प्रहार गर्ने इटालियनहरू गर्न थाले। त्यो इटालियन स्ट्राइकर पाओलो Rossi, मुख्य goalscorer सूचीबद्ध थियो फिफा विश्व कप समाप्त हुँदा छ।
यो के हो - राष्ट्रिय टोली मुख्य गणक हुन र इटालियनहरू लाखौं को मूर्ति बन्न - उहाँले पहिलो पटक लाग्यो। वर्ष मा, Rossi युरोप र विश्व मा सबै भन्दा राम्रो खेलाडी नाम थियो। यस प्रतियोगिताको अन्तमा इटालियनहरू3को एक स्कोर संग जर्मन राष्ट्रिय टोली तोड्न व्यवस्थित: 1, र त्यसपछि Rossi आफ्नो छैटौं र अन्तिम गोल गरेका थिए, र त्यो उहाँको लागि निर्णायक थियो। अन्तिम मा जर्मन फ्रान्सेली भन्दा विजय प्राप्त भएको थियो जुन एक दण्ड सुटआउट, गर्न सफल धन्यवाद थिए।
ब्राजिलियन फिफा विश्व कप
पहिले नै उल्लेख रूपमा, "संसारमा च्याम्पियनशिप" भनेर 1982 देखि, विश्व च्याम्पियनशिप शीर्षकमा विशेष प्रयोग गरिन्छ नाम हो अर्थ "संसारमा"। जानिन्छ, विश्व कप बाहेक, हरेक चार वर्ष आयोजित, त्यहाँ जो पनि एक विजेता प्रत्येक4वर्ष निर्धारण युरोपेली च्याम्पियनशिप छ। तर, राष्ट्रिय टोलीका लागि युरोपेली प्रतियोगिताको उहाँले छैन विशेष नाम त, यस्तो लोकप्रियता पाएको छैन। के शब्द "विश्व च्याम्पियनशिप" गर्छ, यो बुझ्न सम्भव र ब्राजील मा आयोजित थियो जो पछिल्लो विश्व फुटबल प्रतियोगिताको, थियो।
को खडा सबै देशहरूको प्रशंसक मूर्तिहरू समर्पित slogans chanted। सबैभन्दा फुटबल टूर्नामेंट को अनौपचारिक नाम पहिले नै निरन्तर, किनभने पाठकहरूलाई शब्द को मूल पनि थाहा छैन, के छलफल गरिनेछ बुझ्न को पहिलो वाक्य प्रयोग गरिएको छ समीक्षा।
रूस - विश्व कप 2018 को मालिक
हामी पनि रूस मा अर्को फुटबल विश्व च्याम्पियनशिप 2018 मा आयोजित गरिनेछ भन्ने तथ्यलाई उल्लेख गर्नुपर्छ। यो के हो, अन्तमा आफूलाई सबै रूसी लाग्छ। 11 रूसी शहर आफ्नो देश अर्को चार वर्ष को सर्वश्रेष्ठ फुटबल शक्ति को शीर्षक प्राप्त लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ 32 टोली मैदानहरू आफ्नो फुटबल मा लिन। जो थाह सायद यो रूसी राष्ट्रिय टीम को कप्तान उनको टाउको माथि पदक विश्व कप हुनेछन् छ ...
तागत र कमजोरी छ - "म्यान्चेस्टर सिटी" को संरचना
रूसी स्ट्राइकर इगोर Lebedenco
विजेता Pasulko - एक प्रतिभाशाली फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षक
जीवन र मृत्यु Freak (जारी भाग 3)
चार्टर सार्वजनिक संगठन
निजी घरमा ताप योजनाहरु। को ताप सिस्टम को क्षेत्रीय जडान
Thyristors मा भोल्टेज नियामकहरु। स्थिर भोल्टेज नियामक Thyristor
आमा को लागि सबै भन्दा मूल उपहार - त्यो एक महिला छ कि सम्झाउने!
औषधि "Dimia": समीक्षा र पुस्तिका
बाल विस्तार: यो हानिकारक छ कि छैन भनेर? बाल विस्तार दानाको: समीक्षा
न्यूयोर्क किन बिग एप्पल भनिन्छ? न्यूयोर्क शहर बारे रोचक तथ्य
प्रसारण को एक कृत्रिम मार्ग - चिकित्सकीय र निदान हेरफेर संग parenteral चिकित्सा उपकरणहरू मार्फत रोगजनक को प्रसारण छ
बच्चाहरु मा डाइसेबायोसिस कसरी उपचार गरिन्छ